Mandeisma - Wikipedia
Ny mandeisma dia fivavahana abrahamika, batista (manao batisa), monoteista ary gnostika izay tsy manana afa-tsy mpino miisa anarivony.
Fototry ny lamim-pampianaran'ny mandeisma ny fifanoheram-poto-javatra roa (doalisma) izay ahitana ny "tontolo ambony" sy ny "tontolo ambany", ny "toeran'ny fahazavana" sy ny "toeran'ny haizina", izay tsy misakana an' Andriamanitra hiditra an-tsehatra amin'ny famoronana, sahala amin'ny fitantatrana ao amin'ny Baiboly. Izany famoronana izany dia notohizan'ny asa maharitra ataon'Andriamanitra sy ny fanambaràna amin'ny alalan'ny "Iraky ny lanitra". Araka ny lovantsofina mandeana dia i Joany mpanao batisa izany iraka izany sady mpaminany lehibe ho an'izy ireo. Ny Mandeana dia mitsaoka an'i Adama, an'i Abela, an'i Seta, an'i Henoka, an'i Noa, an'i Sema, an'i Arama ary indrindra an'i Joany mpanao batisa.
Talohan'ny taona 2003 sy talohan'ny fipoahan'ny ady tao Iràka dia nonina tao Iràka ny ankamaroan'ny Mandeana izay niisa 65 000 any ho any, indrindra manamorona ny tapany ambanin'ny onin'i Tigrisy (na Tigra) sy ny onin'i Eofrata ary manakaiky an'i Chatt-el-Arab (tapany itambaran'i Tigrisy sy i Eofrata), fa ny sasany dia monina any Iràna ao amin'i Khuzestan. Ny ankamaroan'izy ireo hatramin'izay dia niparitaka, indrindra mankany Iràna, ary koa any Siria, any Jordania ary any amin'ireo firenena tandrefana.
Niadian-kevitra ny mety ho fifandraisan'ny mandeisma sy ny kristianisma tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20 nefa tsy nisy vahaolana azo nifanarahana.
Amin'ny teny mandeana izany dia atao hoe מנדעיותא / mandaʻiūtā, fa amin'ny teny arabo kosa dia atao hoe مندائية / mandā'iyyah, ary amin'ny teny farsy (teny persana) dia atao hoe مندائیان / mandå'iyyån. Ny teny hoe mandeana dia manam-pifandraisana amin'ny gnôsisy (na gnôzy) (ny teny arameana hoe manda dia midika hoe "fahalalana", sahala amin'ny teny grika hoe gnosis).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandeisma&oldid=997767"
Dernière modification le 8 Oktobra 2020, à 10:47
Voaova farany tamin'ny 8 Oktobra 2020 amin'ny 10:47 ity pejy ity.